K: အိပ်မက်တွေ စီးပြီး သွားတဲ့ ခရီး
အိပ်မက်တွေ စီးပြီး သွားတဲ့ ခရီး
ကောင်မလေး နဲ့ ကျောင်းသား တချို့ နေ့လည်စာ ဘားထဲ ၀င်လာပြီး ခပ်သွက်သွက်ပဲ ခုံတွေမှာ နေရာယူလိုက်ကြတယ်။ လူတချို့ အံ့သြပြီး ကြောင်ကြည့်နေ တယ် ။ မိန်းမကြီး တယောက်က ဒါ နင်တို့စားတဲ့ဆိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ သူတို့ ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ဆက်ထိုင်နေတယ်။ ချက်ခြင်းပဲ တဆိုင်လုံးရဲ့ အကြည့်က သူတို့ ဆီ ရောက်လာတယ်။ တယောက်တပေါက် သံတွေ ဆူညံလာတယ်။ သူတို့ ကတော့ ၊ ရှေ့တဲ့တဲ့က ကောင်တာကိုပဲ ကြည့်ပြီး ၊ ငါတို့ကို ၀န်ဆောင်မူပေးပါ လို့ ပြောတယ်။ လူတချို့ ဆိုင်ထဲကနေ..ဆဲဆို မြည်တမ်းပြီး ထွက်သွားကြတယ်။ သူတို့ အသံကို ထပ်မြှင့်တယ်။ ဆိုင်ထဲက လူတွေ ၀ိုင်းလာကြတယ်။ တယောက်က ငရုတ်ဆီပုလင်းကို ယူပြီး ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာ ကို ပက်လိုက်တယ်။ နောက်တယောက်က အချဉ်ရေတွေ ခေါင်းပေါ် လောင်းချတယ်။ မျက်ခွံတွေ အလိုအလျောက် ဖျပ်ကနဲ ပိတ်လိုက် တာကလွဲလို့ တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်ဘူးကြဘူး ။ တယောက်က တံတွေးနဲ့ ထွေးလိုက်တယ်။ စိုရွှဲ ညစ်ပတ်နေတဲ့ မျက်နှာအောက်က ကောင်မလေး ရဲ့ မာချင်ချင် မျက်လုံးလေးတွေက ပိုပြီး တောက်ပြောင်လာတယ်။ ကြံ့ခိုင်ဟန်ရှိတဲ့ မေးရိုးလေးတွေ ပိုပြီး ထောင်လာတယ်။ ကောင်မလေး ရဲ့ ဆံပင်ကို ဆောင့်ဆွဲပြီး ခုံပေါ်က ဆွဲချတယ်။ ကောင်မလေး အသံကုန် အော်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ နောက်ပြကွက် တခု ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။
သူ့ထိုင်ခုံ ရှေ့က မြင်ကွင်းကျဉ်းကျဉ်း တီဗွီ မျက်နှာပြင်လေးကို ကြည့်ရင်း အသက်ရှု ကျပ်လာတယ်။ သက်ပြင်းတခု ၀၀ ရှုသွင်းချ လိုက်ရင်း တီဗွီလေးရဲ့ လမ်းကြောင်းပြ ခလုတ်ကလေးကို ပြောင်းနှိပ်လိုက်တယ်။ သူတို့ လေယဉ်ကြီးက ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ ကြီးကို တော်တော်တောင် ဖြတ်ပြီးနေပြီပဲ ။ လေယဉ်ခရီးရှည် စီးရတဲ့ ညဖက် အချိန်တွေမှာ သူ စိတ်ချ လက်ချ အိပ်မပျော်တတ်ပါ ။ ရုပ်ရှင်တွေ တကားပြီး တကားကြည့်လိုက် စာဖတ်လိုက် တရေးငိုက်လိုက် သာ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ဖို့ ရွေးတော့ ၊ အခု ကိုယ်သွားလည်မဲ့ နိုင်ငံရဲ့ လူမူသမိုင်းကြောင်း နဲ့ ဆက်စပ် တာကို သာ ရွေးမည်လို့ ပေါ့ ။ ပြောတော့လည်း ၊ ကမ္ဘာမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြည့်ရှု အသုံးတော် ခံ ကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇတ်ကား ဆိုတာတွေကလည်း ၊ အဲဒီ အမေရိက နိုင်ငံ ကြီးကပဲ ထုတ်လုပ်ပြီး အဲဒီ အမေရိကနိုင်ငံ နောက်ခံ တွေသာပဲ ခပ်များများ မဟုတ်လား။
အခု ကြည့်နေတဲ့ The Butler ရုပ်ရှင်ကလည်း ၊ အမေရိကန် သမ္မတ ခုနှစ်ဆက် တာဝန်သိသိ သစ္စာရှိရှိ ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် အာဖရိကန် လူမည်း ကြီး တယောက်ရဲ့ အိမ်ဖြူတော် မီးဖိုချောင်က လက်ဖက်ရည်ဆက်သ တဲ့ အလုပ်နဲ့ သားကြီး ဖြစ်သူရဲ့ အသားအရောင်ခွဲခြားမူ တိုက်ဖျက်ရေး civil right လှုပ်ရှားမူ တွေကြားက ၊ လိပ်ပြာတိုက်ပွဲ အကြောင်း ။ တကယ့် အဖြစ်မှန် ကို အခြေခံထားတယ် ဆိုပေမဲ့ ၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း တို့ ရဲ့ ထုံးစံ လုပ်ဇာတ် ထိုးကွက်ကလေးတွေ လည်း ပါမည်ပေါ့ ။ အထူးသဖြင့် အိမ်ဖြူတော် အထက်တန်းလွှာ လူဖြူတွေ ကို အထင်ကြီး စိတ်ဝင်စားရင်း တဖက်ကလည်း ခွဲခြားကန့်သတ်ခံ ဘ၀တူ လူမည်းတွေ အတွက် မခံချင် ၊ ခင်ပွန်း နဲ့ သား အကြား ဗျာများရတဲ့ ဘတ်တလာ ကြီးရဲ့ မိန်းမ နေရာမှာ ထူးထူးခြားခြား ထဲ့ရိုက်ထားတဲ့ နာမယ်ကျော် တီဗွီအစီအစဉ် တင်ဆက်သူ အော်ပရာ ၀င်းဖရေး ကြောင့်လည်း ဒီဇာတ်ကား ကို ကြည့်ဖြစ်သွားတယ် ဆိုပါတော့။
ဒရာမာ ပီပီ ၊ လေးတွဲ့တွဲ့ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်တွေကြား တချက် တချက် အိပ်ငိုက်သွားပေမဲ့ ၊ အိမ်ဖြူတော်က ဘတ်တလာရဲ့ သား ကို လှုပ်ရှားမူတွေထဲ ပါလာအောင် ဆွဲဆောင် စည်းရုံးခဲ့တဲ့ ချစ်သူ လူမည်းမလေး ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်ကလေး တွေက၊ တမျိုး ကြည့်လို့ ကောင်းလှသည် ။ sit-in လှုပ်ရှားမူ လို့ ခေါ်တဲ့ သူတို့ ကောလိပ် ကျောင်းသား အဖွဲ့ တွေရဲ့ ၊ လူမည်းမ၀င်ရ ဆိုင်တွေထဲကို အတင်းဝင်ထိုင်ကြတဲ့ အခန်း ပြီးသွားတော့ ၊ အတွေးတွေက ဟိုဟုိုဒီဒီ။
ခွဲခြားကန့်သန့်မူ ဆိုတာ အသားအရောင်တင် မကပါဘူး . . ဘယ်အတွက်မှ မရှိသင့်တာ ။ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်လေ ဘယ်သူ ခွဲခြားကန့်သတ်ခံရသူ ဖြစ်ချင်မလဲ ။ တကယ်ဆို အမေရိကန် အသားအရောင်ခွဲခြားမူ ပြည်သူ့ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမူတွေ အထွတ်အထိပ်ရောက်နေခဲ့တဲ့ ၁၉ ၅၀-၆၀ ဆိုတဲ့ နှစ်ကာလတွေက ဘာမှ သိပ်ဝေးလှသေးတဲ့ သမိုင်း မဟုတ်။ ခုတော့ အမေရိကန်သမ္မတပင် လူမဲ အနွယ်ထဲက ဖြစ်လာခဲ့ပြီ မို့ ၊ ဘတ်တလာကြီး လည်း သေပျော်ပြီပေါ့ ။
အမေရိက ကို သွားကြမယ် ဆိုတော့ သူက အဲ့ဒီလို သမိုင်းကြောင်း နက်ရှိုင်းခဲ့တဲ့ အရှေ့ဖက်ခြမ်း ပြည်နယ်တွေဆီ သွားပြီး ခြေရာခံကြည့်ချင်သည်။ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ ၀ိညဉ်တွေ ခိုတွယ်ရာ အင်ဒိစ် တောင်တန်းကြီးတွေ အနား ဝေ့သီ ကြည့်ချင်သည်။ ဒါပေမဲ့ အခွင့်မသာ ။ သူတို့ ဦးတည်ရာ က၊ အနောက်ဖက်ခြမ်းကမ်းခြေဒေသ က မြို့ပြတချို့ဆီ ။ “ကေ” ဒီဖက် လာနိုင်ရင် အရမ်း စိတ်ဝင်စားမှာပဲ ဒီမှာ မာတင်လူသာကင်း ဂျုနီယာ ရဲ့ အမှတ်တရ နေရာတွေ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အတ္တလန်တာ မှာ နေတဲ့ မချိုရဲ့ ဖိတ်ခေါ်သံ ကို ဖုန်းထဲမှာ ပဲ မေ့ပျောက်ပစ်လိုက်ရသည်။
ခရီးက တ၀က်ကျိုးလာပေမဲ့ လေယဉ်ပျံ ဦးတည်ရာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ကို ရောက်ဖို့ နောက်ထပ် ၆ နာရီ လောက် လိုသေးသည်။ ရုပ်ရှင်လည်း ဆက်မကြည့်ချင် ။ စာဖတ်မယ်ဆိုပြီး Kindle လေးကို ဖွင့်သည်။ စာအုပ်က ၊ နိုဘယ်ဆုရှင် အမေရိကန်စီးပွားရေးပညာရှင် ဂျိုးဇက်စတစ်ဂလစ်ဇ် ရဲ့ The Price of Inequality ။ ဖတ်လတ်စ မှတ်ထားတဲ့ နေရာက ပထမဆုံး အခန်း ဖြစ်တဲ့ America’s 1 percent Problem .
တကယ့်တကယ် မြောက်အမေရိက တိုက်ကြီးပေါ်ကို ခြေချမိတော့ ၊ သူ့ အတွေးအာရုံတွေထဲ လောလောလတ်လတ် ရောက်နေတဲ့၊ ပြည့်သူ့ အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ မာတင်လူသာကင်း တို့ လူမဲအဖွဲ့တွေ ကိုလည်း မတွေ့ရ ။ ခေါင်းပေါ်မှာ သိမ်းငှက်အမွေးအတောင်တွေ တလူလူ ထောင်နေတဲ့ ၊ လေးမြှားတလက် နဲ့ လူနီအုပ်စု တွေကိုလည်း မမြင်ရ ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနေမိတဲ့ Wall Street ပေါ်က တစ်ရာခိုင်နှုံး သော လူဖြူ ဆိုတာတွေက တော့ ဝေးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူဝါ၀ါ တွေကိုတော့ ပေါပေါများများ တွေ့ ရပါရဲ့ ။ သေချာတာတော့ အပြင်က လာလည်တဲ့ သူတယောက် အနေနဲ့ အမျိုးအမည် အရောင် ခွဲခြားလို့ မတတ်နိုင်တဲ့ ၊ အရောင်ပျယ် နေတဲ့ သူတွေ ကသာ အများစု ။ ဒါကိုက အမေရိက ရဲ့ အမှတ်အသား တခု လို့ ဆိုသည်။
ဒီ့ထက် ထူးခြားတာက၊ အရောင်ပျယ်ယုံ ပျက်ယုံတင်မက ညစ်ထပ် နွမ်းဖတ်နေတဲ့ လူ တွေကို အမေရိက ရဲ့ လမ်းဆုံ လမ်းခွ တိုင်း မှာ တွေ့ရတာပဲ ။ သူတောင်းစားတွေ အလှူခံတွေ ပေါပါတယ်ဆို တဲ့ ကိုယ်တို့ မြန်မာပြည်ကြီး လောက် နီးနီး ၊ စာရွက်ကလေးတွေထောင် ၊ ခွက်ကလေးတွေချ ပြီး ၊ တောင်းစားနေတဲ့ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဆိုတဲ့ လူတန်းစား တရပ်ကို ၊ အမေရိကမှာ မမျှော်လင့်ပဲ ၊ အမြောက်အမြား တွေ့ နေရသည်။ စတစ်ဂလစ်ဇ် ပြောတဲ့ Inequality ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး သက်သေ တွေပဲလား ။ လုပ်ခ လစာ အတွက် ဆန္ဒပြနေတဲ့ အလုပ်သမားအဖွဲ့ တချို့ကိုလည်း မြို့လယ်ခေါင်က နာမယ်ကြီး ဆိုင်ကြီးတွေ ရှေ့မှာ တွေ့နေရတယ်။
ကိုယ်တိုင်က လူဝါ မို့ ၊ အနီးအပါး သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေ အကုန် ၀ါတာတာ ဖြစ်နေတာ မဆန်းပေမဲ့လို့ ၊ ပထမ ဆုံး ရောက်သွားတဲ့ ဆန်ဖရန်စ္စကုို ဘေးဧရိယာမှာ ၊ အဘိုးအဘွားက စလို့ တူ-တူမ တွေအထိ ၊ စားရင်းဝင်ပြီး ဖြစ်နေတဲ့ ၊ မြန်မာပြည်ပေါက် တရုတ်အနွယ် တွေ တော်တော်များများကို အခြေတကျ ဖြစ်နေကြတာ တွေ့တော့ အံ့သြနေမိတယ်။ အမ လိုလည်း ဖြစ် ၊ ဆရာမ လည်း ဖြစ်နေတဲ့ ဒေါ်နီနီလွင် ရဲ့ sun set က အခန်းလေးမှာ ခဏ တည်းခိုနေတုန်း ၊ မနီက.. အန်းမ လို့ ခေါ်တဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အခန်းက တိုက်ပိုင်ရှင် အဒေါ်ကြီး တိုင်ချိ ကစားဖို့ အောက်ဆင်းတာနဲ့ တခေါက် နှစ်ခေါက် ကြုံသည်။ နေသာတဲ့ မနက်ခင်းတွေမှာ Sun set ကမ်းခြေတလျှောက်မှာ နဂိုအရောင်ပျယ်နေတဲ့ သူတွေ တောက်ပတဲ့ အရောင်အသစ်တွေနဲ့ လမ်းလျှောက်သူက လျှောက်၊ အပမ်းဖြေသူက ဖြေ ။
တညနေတော့ ဘူမိက ဆရာဦးကိုကိုသန့်က ကားနဲ့ လာခေါ်ပြီး Twin Peaks လို့ ခေါ်တဲ့ တောင်ထိပ်ရှုခင်းသာ ကို လိုက်ပို့သည်။ ဒီနေရာက နေ၀င်သွားပြီးကာစ အချိန်မှာမှ အလှဆုံးလို့ ဆိုသည်။ အလင်းဖျော့ဖျော့ တောင်ထိပ်မှာ ကိုယ်တွေလိုပဲ နေ၀င်ချိန်ကို စောင့်ကြည့်နေကြ တဲ့ ၊ အရောင်ပျယ်လူတစု ကို တွေ့ရသည်။ ဆရာ က ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းက တံတားကြီး တခု ကို လက်ညှိးထိုးပြပြီး ၊ အဲဒီဘေးက ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ ငါတို့ လုပ်ခဲ့တာပေါ့ကွာ လို့ ပြောသည်။ ဆရာ့ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်တော့ နေ၀င်ပြီးကာစ ညနေရောင် အောက်မှာ မသဲမကွဲ။ ကြည့်နေရင်းပဲ ပြာရီရီ ညဦးကောင်းကင် ရဲ့ အောက်မှာ ၊ ဆန်ဖရန်စ္စကို မြို့ ကြီးက မီးရောင်တွေ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် နဲ့ အသွင်ပြောင်းသွားတော့သည်။
တကယ်တော့ အခု ခရီးစဉ်မှာ ဆန်ဖရန်စစ္စကို မပါခဲ့ ။ အမျိုးသားရဲ့ အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ Utah ပြည်နယ်ထဲက Salt Lake City ကိုလာဖို့က အဓိက ။ ပြီးရင်တော့ တထောက်နားရာ LA မှာပဲ လည်ပြီးပြန်ကြမည်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိစ္စက မက္ကစီကိုထိ ရောက်သွားလေတော့ တယောက်ထဲ ဆန်ဖရန် ဆင်းလည်ရဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ တာ။ ဆန်ဖရန်မှာ တွေ့မယ်လို့ ချိန်းထားသူတွေထဲမှာ မနီ ကလွဲလို့ တယောက်မှ အပြင်မှာ အသေအချာ ဆုံဖူးထားတာ မဟုတ်။ ဒါပေမဲ့ ၊ တွေ့လိုက်ကြတော့လည်း ၊ ဘယ်အချိန်တည်းက မိတ်ဆွေရင်းတွေလို ဖြစ်နေခဲ့မှန်းလည်း မသိ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော် အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေ မကျယ်ပြန့်လှခင် အချိန်တွေတည်းက ၊တစိုက်မတ်မတ် အားပေးလာခဲ့တဲ့ မိုးမခ မိသားစု နဲ့ လည်း တွေ့ချင်သည်။ ကံကောင်းချင်တော့ စိန်ပန်း နဲ့ ကံ့ကော် စာအုပ်ကလေး ကြောင့် ၊ အမျိုးပြန်စပ်ဖြစ်သွားတဲ့ အင်းလျားညီအမ မမြတ်မိုး တို့ မိသားစု ကလည်း စင်ကာပူကနေ ၊ အမေရိက ကို ပြောင်းရွှေ့ လာကာစ - မိုးမခ နဲ့ နီးစပ်သူတွေ ။ မိုးမခ ကိုရစ် ရဲ့ အမျိုးသမီး မမေသန်းဌေး နဲ့ မနီ ကလည်း ရခိုင်သူခြင်းတွေ ။ အားလုံး ဆက်စပ် လိုက်တော့ ၊ ဒီ အ၀န်းအ၀ိုင်းထဲကချည်း ။ ဒီကြားထဲ အမ ဖြစ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်း မမိစံ ကြီးကလည်း မအားတဲ့ ကြားက အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး တရက် လိုက်လည်ပြီး မုန့်ကျွေးသည်။ အဲဒီမှာ ထူးထူးခြားခြား ကျေးဇူးတင်ရမှာက၊ လူခြင်း နာမယ်ခြင်း တခါမှ မဆုံဘူး မကြားဘူးခဲ့ပေမဲ့ ၊ ဆွေမျိုးသားခြင်း တယောက်လို ဂရုတစိုက် အလည်လိုက်ပို့ ပေးကြ တဲ့ ၊ မနီ ရဲ့ ဘာသာရေးမိတ်ဆွေ မြန်မာတရုတ် အမျိုးသမီးကြီးတွေ ။ သူတို့ ကောင်းမူကြောင့် ဆန်ဖရန် ကို တော်တော်စုံ သွားတဲ့ အပြင် ၊ ပြတိုက် သုံးခု စလုံးရဲ့ လက်မှတ်ကိုတောင် လက်ဆောင်ရလာအောင် နှံ့စပ် အပေါင်းအသင်းဆန့်လှသူတွေ ။
မထင်မှတ်ထားပဲ အားလုံးက သိုက်သိုက်မြိုက်မြိုက် ဖြစ်နေသည်။ ဒါတောင် ၃ နာရီလောက် မောင်းရတဲ့ မြို့က ဘလော့ဂါ ညီမလေး ရွှေဂျမ်းကလည်း သူ့ဆီကို ရောက်အောင်လာဖို့ ခေါ်နေသေးသည်။ တက်စီမောင်းနေတဲ့ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်း တယောက်က လည်း ၊ အပြန် လေဆိပ်လိုက်ပို့မယ်လို့ ဖုန်းလှမ်းဆက်ထားသည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို မှာ နေတဲ့ တပတ်က ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်းပင် မသိလိုက်။ တောင်ကုန်းလေးတွေ အတက်အဆင်း ၊ အိမ်လေးတွေ အနိမ့်အမြင့် နဲ့ ၊ အလှဆုံး မြို့လေးကို ခြေလျင်ပင် လျှောက်မကြည့်လိုက်ရ ။
ဒါပေမဲ့ ဂိုးဒင်းဂိတ် တံတားကြီး ပေါ်မှာ ခြေလျင်ဖြတ်လျှောက်ဖို့ကိုတော့ မမေ့ခဲ့ပါ။ တံတားနီနီကြီး ပေါ်ကနေ၊ ကောင်းကင်ပြာပြာ အောက်က ညို့တို့တို့ ပင်လယ်အော်ကြီးကို ငေးရင်း လူဖြူတွေ မရောက်လာခင်တုန်းက ဒီနေရာတွေဟာ နတ်ပြည်လိုများ ဖြစ်နေမလားလို့ တွေးချင်ရာတွေး ကြည့်သည်။ တံတား လက်တန်းကြီးတွေကို ချည်(မ) ထားတဲ့ လက်မောင်းလောက် သံကြိုးနီနီ ကြီးတွေကို ပွတ်သပ်ကြည့်ရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တရာလောက်က ၊ ဟိုး .. ထိပ်က သံယက်မ စင်ကြီးတွေပေါ်မှာ ထိုင်နေခဲ့တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားကြီးတွေရဲ့ ၊ ကမ္ဘာကျော် ဓါတ်ပုံတပုံကို ပြန်အသက်သွင်းကြည့်နေမိတယ်။
ပါးစပ် ကလည်း မမြတ်မိုး နဲ့ စကားတွေ ပြောလို့ မကုန်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ညက ကိုတိုးလွင် ဆီ သွားရင်း ရောက်ခဲ့တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံကြီး နဲ့ အန်အယ်ဒီ LA ရုံးခန်းလေး အကြောင်းက စလို့ ၊ အန်အယ်ဒီ ပါတီကြီးရဲ့ သမိုင်းအဟောင်းတွေ အထိ ၊ သူတို့မှာ ပြောစရာတွေ တူနေကြသည်။ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မူ တွေနဲ့ အတူ၊ ပြောင်းရွေ့ နေကြရတဲ့ အလုပ်အကိုင် ဘ၀ အာမခံချက်တွေ အကြောင်းလည်း ပါသည်။ အန်အယ်ဒီ LA က လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မှာ မဟုတ်ပဲ ဘယ်လိုလုပ် ဆန်ဖရန် ရောက်နေတာလဲလို့ ပင် နောက်မိသေးသည်။ အခုတော့ အန်အယ်ဒီ အတွက်လည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေ မလိုအပ်တော့ဘူး မဟုတ်လား။ ကိုတိုးလွင် တို့ပင် မြန်မာပြည်ကို ပြန် ပြီး ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ကြတော့မည် လို့ ဆိုသည်။ တံတားကြီးရဲ့ ဟိုမှာဖက်ဆီ ၊ ပစိဖိတ် လမ်းကြောင်းပေါ်က ဖြတ်ကျော် ပျံသန်းသွားတဲ့ ဆောင်းခို ငှက်တအုပ် ကို မြင်ယောင် ကြည့်နေမိသည်။ ပြီးတော့လည်း ငှက်အုပ်ထဲက ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ ငှက် နှစ် ကောင်လိုပဲ ၊ အစာရေစာ ရှာဖွေစားသောက်လို့ ကောင်းတဲံ အရပ်ဒေသ တွေ အကြောင်း တကျိကျိ နဲ့ ဆက်ပြောကြပြန်။
တံတား တခု ကို ဆုံးအောင် လျှောက်ပြီးတော့ လူတွေဘာလုပ်တတ်ကြသလဲ ။ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ကြမှာပေါ့ ။
နေမွန်းတည့်ရဲ့ အတောက်ပဆုံး ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးအောက် က ဂိုးဒင်းဂိတ် တံတားကြီးက ၊ ဂရိပုံပြင်တွေထဲက စောင်းအနီကြီး တလက်လို တူရိယာကြိုးတွေနဲ့ ကွေးညွတ် ညှင်းနွဲ့ နေပုံက ဂီတသံစဉ်ကိုပင် ကြားလာနေရသလို ။ တလောကလုံးကလည်း အပူအပင်ကင်းမဲ့နေဟန်။ အနည်းဆုံးတော့ ၊ ဒီတနေ့တာ ဒီ မနက်ခင်းအတွက်တော့ဖြင့် ၊ အပူအပင် ကင်းမဲ့လှပါသည်။
တံတားကြီးက အပြန် ညနေကျရင် ကိုမောင်ရစ် အလုပ်လုပ်တဲ့ ကျောင်းကို သွားလည် ပြီး ၂ နာရီ နီးပါး မောင်းရတယ်ဆို တဲ့ ရစ်ခ်ျမွန် က သူတို့ အိမ်ကို လိုက်လည် ကြအုံးမည်။ မိုးမခ ရဲ့ စာတွေအကြောင်း စာအုပ်တွေ အကြောင်း ၊ အားပါးတရ ပြောကြရအုံးမည်။
Salt Lake City ကို ရောက်တော့ ၊ အမျိုးသားက ကွန်ဖရန့်စ် နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ၊ မိုးလင်းရင် ဟိုတယ်က ထွက်ပြီး ဟန်းဖုံး မြေပုံ လမ်းညွှန် နဲ့ မြို့ ထဲ တယောက်ထဲ လျှောက်ပတ်သည် ။ ရေခဲတောင်တွေ ပတ်ပတ်လည် နဲ့ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ကျင်းပရာ မြို့ကြီး ဖြစ်သည်မို့ ဧည့်သည်တွေ အ၀င်အထွက် အတော်များပုံရပေမဲ့ ၊ ကုန်းတွင်းဖက် ကျတဲ့ မြို့ပီပီ ၊ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နဲ့ အမေရိကန် ပိုဆန်သည်ပဲ ပြောရမလား။ ကြီးမားလှတဲ့ မိုမွန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီး နဲ့ ပြတိုက်ကြီးကြောင့် ၊ ရှေးရိုးစွဲ လူဖြူတွေ အတော်များမည်လို့ ခန့်မှန်းရနိုင်သည်။ အင်ဖော်မေးရှင်း စန်တာက မြေပုံတွေထဲမှာ ၊ ဒီကနေဆို ဂရင်းကန်ညွန် ကျောက်တောင်ကြီးတွေ ကိုတောင် သွားလို့ရနေပြီ . . . နီးနေပြီ ဆိုတော့ ၊ ကျောက်တွေ တောင်တွေကို သံယောဇဉ်ရှိသူမို့ စိတ်က ၀င်စားနေမိပြီ။
ဂရင်းကန်ညွန် ချောက်ကြီးရဲ့ တောင်ကမ်းပါးယံ မှာ နေတဲ့ သိမ်းငှက်ကြီးတွေကို ကြည့်ချင်သည်။ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ၀ိညဉ်တွေကို တောင်ထိပ်က လေတွေ ထဲမှာ ရှာ ကြည့်ချင်သေးသည် ။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ဖရန်စ်က အပြန် လည်ဖို့ရက်က သိပ်မကျန်တော့။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် မှာ စောင့်နေတဲ့ မမိုးချိုသင်း က ၊ “ကေ” ရေ.. ဂရင်းကန်ညွန်က ရောက်လဲ ကောင်းတယ် . . . မရောက်လဲ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယို ကတော့ လည်သင့်တယ်နော် လို့ ဆိုသည်။ အမျိုးသား ကလည်း ၊ ယူက ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ ၀အောင် လည်ပြီးပြီ. . . ငါက မြို့ပေါ်မှာ မလည်ရသေးဘူး . . လို့ - ဆိုလာတော့ ၊ စိတ်ကို ဒုံးဒုံးချ လို့ ၊ အမေရိက ရဲ့ အန်တာတိမ်းမန့် မြို့တော်ကြီးဆီ တန်းတန်းမတ်မတ် ရောက်သွားရတော့သည်။
တန်းမတ် ယုံတင် မက၊ တဲ့တဲ့ပါ တိုးချင်တော့ ၊ သူတို့ ရောက်သွားတဲ့ ရက်တွေက ၊ ဟောလိဝုဒ် တရပ်ကွက်လုံး အော်စကာ ဆုပေးပွဲ အတွက် ၊ ရွစိတွေ ထိုးနေတဲ့ အချိန်။ ဘေးက တယောက်လည်း ရွစိ ရွစိပေါ့။ ကိုယ် ကတော့ ဘာကို ရွစိ ရမှန်းကို မသိနိုင်ပဲ ၊ ကိုယ့် ကို ကိုယ် တောင် ပျောက်နေခဲ့သည်။ သူတို့ တည်းတဲ့ ဟိုတယ်က သဘက်ခါ အော်စကာပေးမဲ့ ဒေါ်လဘီ သီရေတာ နဲ့ ကပ်ရပ်မို့ ဟိုတယ် အ၀င်အထွက်တောင် အစစ်အဆေးတွေ စလုပ်နေသည်။
Hard Rock Café – Hollywood ဆိုင်ထဲ ၀င်ပြီး ကလေးတယောက်လို ပျော်နေတဲ့ ဘေးက ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကို ကြည့်ပြီး ၊ နားမလည်နိုင်သလို ၊ သူကလည်း ငုံးတိတိ လုပ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို နားမလည်နိုင် ဖြစ်နေတာမို့ ၊ ဘဲစားဘဲချေ လုပ်ပြီး မသိချင်ယောင် ဆောင်၊ ဟိုငေး ဒီငေး လုပ်နေလိုက်သည်။ တယောက်တည်း တီရှပ်တွေ ရွေးလိုက် ၊ ဦးထုပ်တွေ ဆောင်းကြည့်လိုက် ပျာယာခပ်နေတဲ့ သူက ၊ သူပြောသလိုဆို ဘရန်း တွေကို တန်ဖိုးမထား ကပ်စည်းနဲ မနာလို မရှုဆိမ့်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ဆီက နိုး လို့ ပြောမယ်ဆိုတာ ကြိုသိနေတော့ ၊ မှန်တွေနောက်က အယ်လ်ဗွီ အိတ်တွေကို မေးငေါ့ပြရင်း ယူမလား လို့ ၊ လာကလိ နေသေးသည်။ ဒီကြားထဲ အမေရိက သွားမယ်ဆိုလို့ အိတ် မှာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လည်း ရှိသေးသည်။ အိတ်တွေ အကြောင်း သူ ထပ် မပြောချင်တော့ ။ တော်ပြီ။ Hollywood Boulevard လမ်းမကြီး ဘေးတဖက်တချက်ကနေ မင်းသားမင်းသမီးတွေ အလာကို ရူးသွပ် တိုးဝှေ့ ကြမဲ့ သူတွေ အကြောင်း ငြင်းခုံရင်း ရန်ဖြစ်ရ အုံးမည်။
ကိုယ်တော်ချော ကတော့ ဆန်းဒေး အော်စကာဆုပေးပွဲ နေ့ကျ ၊ ဒီနေရာကနေ လာချောင်းအုံးမတဲ့ ။ နောက်နေ့ Hard Rock Café ဘားမှာလည်း တယောက်တည်း ထပ်လာထိုင်အုံးမတဲ့ ။ ကိုယ့် အတွက်ကတော့ ၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ နှစ်သက်တဲ့ မော်ဂန်ဖရီးမင်း ကြီးကို အပြင်မှာ တွေ့ လည်း ၊ တွေ့တယ်ပဲပေါ့ ။ အတင်းတော့ လိုက်တိုးဝှေ့ မကြည့်ချင်ပါဘူး။ အဲ့လိုဆိုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်တခု သွားသတိရသည်။ နယ်ကနေ ရန်ကုန်ကို အမြန်ရထားကြီး စီးလာရင် မနက် ၅ နာရီဆို ဘူတာကြီးကို ရောက်တယ်လေ ။ တခါတော့ ခြင်းတွေ အိတ်တွေ ဆွဲလို့ လူကြီးတွေနောက်က လိုက်ရင်း ၊ စမ်းချောင်းကို ဘက်စကားစီးသွားဖို့ ၃၈ လမ်းထဲက အဖြတ် ၊ မနက်စောစောစီးစီး အိပ်မှုန်စုံမွှားပုံနဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကွမ်းသီး ကို တွေ့တော့ ၀မ်းသာအားရ လက်ညှိုးထိုးပြီး အော်မိခဲ့ဘူးတယ်။ အခုလည်း ရပ်ဆဲလ်ခရိုး လောက် မဟုတ်တောင် ဟောလိဝုဒ် ကွမ်းသီးလောက်တော့ တွေ့ချင် တွေ့မှာပေါ့လို့ ။
ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယို ထဲမှာ အက်ဒီမာဖီ ကို တွေ့ဖူးတယ် ဆိုတဲ့ မချိုသင်းက တော့ ၊ သူပြောထားတဲ့ အတိုင်းပဲ ၊ ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယိုကို အကျအန ကို လိုက်ပို့လေတော့သည်။ တနှစ်စာကဒ်တင်မက.. တသက်စာ ကဒ်ပါ ၀ယ်ထားပုံ ရတဲ့ မချိုသင်း တို့ မောင်နှံ ကို ၊ တခြားသူငယ်ချင်းတွေက ၊ ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယို ရဲ့ တိုင်တလုံး တောင် ရှယ်ယာ ပါနေပြီ လို့ နောက်ကြသည်။ ခဏခဏ ရောက်မှာပေါ့နော် ဆိုတော့..တနှစ်ကို ဆယ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်မလားပဲ လို့ ဇဝေ ဇ၀ါ နဲ့ ဖြေသည်။ အေးလေ မချိုသင်း တို့ ဆီမှာ ၊ ဆရာကြီး တင်မိုး ရှိကတည်းက ၊ စာပေ မိတ်ဆွေ နိုင်ငံရေး မိတ်ဆွေ .. မြန်မာဧည့်က ပြတ်တယ်မှ မရှိပဲ ။ အခုတောင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နယူးယောက်က မချောအိသိမ်း ပါ အလည် ရောက်နေတော့ ၊ မချိုသင်းရဲ့ ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယို တိုးရ် က ၊ လူပိုစုံ ပြီး ပျော်စရာကောင်းနေသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ တနှစ်မှာ တရက် နှစ်ရက်သာ မိုးရွာတယ်ဆိုတဲ့ အယ်အေ မှာ ဒီနေ့ မှ မိုးတွေက လည်း စွေလို့ ။ အိမ်ရှင် နှစ်ယောက်ကလည်း ဒီနေ့က သူတို့ရဲ့ ၁၈ နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာ နှစ်လည်တဲ့။ ကဲ ဒီနေ့ မှ ထူးထူးခြားခြား မပျော်ရရင် ၊ ဘယ်နေ့ ကို ရွေးအုံးမလဲ။ တကယ်ကိုပဲ ၊ ကလေးဘ၀တုန်းကလို မိုးရွာထဲမှာ မိုးကာတွေ ၀တ်ပြီးတော့ကို ၊ တနေ့လုံး လျှောက်ပတ်ကြတော့တာ ။
သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ ခြံ ထဲ လာကစားလို့ ပျော်နေတဲ့ ကလေးလေး တယောက်လို ၊ မချိုသင်း တယောက် ၊ တတောက်တောက် နဲ့ ဒါက ဟောက်စ်အေ့ဖ် ဟော်ရာ သရဲခြောက်တာပါပဲ… ဟိုးမှာ ကင်းကောင် သရီးဒီ . . . လာလာ..ဒါက ရှာ့ခ် ဖိုးဒီ ၀င်ကြမယ်နော် ဆို သူတို့ လိုက်ဝင်ကြပေါ့။ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ ကတော့ နောက်မှာ ( ပြုံးပြုံး) ၂ နဲ့ ။
4D ကလည်း Sherk မို့လို့သာ တော်တော့တယ်။ မြည်းကြီး တံတွေးထွေးလည်း တံတွေးစင် . . . တော်ကြာ ဂုပ်ပေါ် ပင့်ကူတွေ ပြုတ်ကျလာလိုက် နဲ့ အက်ရှင်ကားသာ 4D ကြည့်ရရင်တော့ မျော့မျော့ပဲ ကျန်မှာ လို့ ပြောပြီး ၊ သူတို့ ရီ ကြပြန် ။ 4D တင်မက 5D 6D 7D တွေကိုပါ.. မချိုသင်းက ပြသေးသည်။ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ နဲ့ မချောအိ ကို ကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာ ထားခဲ့ပြီး ၊ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ၊ Jurassic Park ကို သွားမယ်နော်. . . စီးလို့ ကောင်းတယ် အေးအေးဆေးဆေးပဲ .. တဲ့ ။ ဘာကို စီးရမယ်မှန်း သူ သေချာမသိ ။ ပါ့ခ် ဆိုတော့လည်း အေးအေးဆေးဆေး ဟုတ်မှာပဲ ပေါ့ ။ ကားထွက်ခါစ ၊ ပန်းလေးတွေ ရေတံခွန်လေးတွေကို မြင်တော့ . . . တွေ့လား သူက သာသာယာယာလေးရယ် လို့ လုပ်သေးတယ်။ တအောင့်နေတော့မှ၊ လက်ကိုင်လေး ကိုင်ထားနော် ဆိုတဲ့ စကားလည်း ဆုံး.. တခါတည်း ဒိုင်မန်းရှင်းတွေ ၉ ကျော်သွားလိုက်တာ ။ ပြန်အထွက်ကျမှ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ထားတာ ရွေးလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ ကွန်ပြူတာ မျက်နှာပြင်မှာ ရှာ ကြည့်တော့ . . . အို့ အိုး သူ့မျက်နှာက ငရဲအိုးထဲ ဇောက်ထိုးကျတဲ့ မျက်နှာလို ။ မချိုသင်းကတော့ အေးဆေးပဲ ပြုံးလို့ ။ မ. . . အဲဒါတွေ ဧည့်သည် လိုက်ပို့တိုင်း စီးလားလို့ အံ့သြတကြီးမေးတော့ ၊ တခိခိ နဲ့ Mummy ရှိသေးတယ် သွားစီးကြမယ် တဲ့ ။
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေ ထဲ့ တဲ့ ၊ ရှိုးကိုတော့ အားလုံး ကြိုက်ကြသည်။ ကြည့်လို့ အကောင်းဆုံးကတော့ တကယ်လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေထဲကို ကားနဲ့ ဖြတ်မောင်းပြတဲ့ တကယ့် စတူဒီယို တိုး ပဲ ။ ကြားထဲမှာ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေ လည်း ပါသည်။
ကားပေါ်ထိုင်နေရင်းက ဒိုင်နိုဆောကြီး ထွက်လာလိုက် . . . မုန်တိုင်းတွေကြီး ရေတွေ လျှံ လာလိုက် . . . ဘူတာရုံထဲရောက် ရထားတွေ တိုက်လိုက် . . . ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်က လေယဉ်ကြီး ပျက်ကျ လာလိုက် . . . နယူးယောက် ကို ရောက်သွားလိုက် . . . ဥရောပ ကို ရောက်သွားလိုက် . . . အိပ်မက်ထဲက ပြကွက်တွေလို အဆက်အစပ်မရှိ တခုပြီး တခု ပြောင်းသွား သည်။ တကမ္ဘာလုံးက လူတွေကို ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်တွေက အဲဒီလို ဖမ်းစားထား ခဲ့တာကိုး ။
ရုပ်ရှင် ဆုိုတာ အိပ်မက်တွေကို ရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းလို့ ဆိုကြသည်။ တချို့ကတော့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ တွေတင်မက ၊ လောကရဲ့ အနိဌါရုံ အကျပ်အတည်း အခက်အခဲတွေ ထဲလည်း ၊ အလည်အပတ် ဆင်းကြည့်ချင်ကြသေးသည် ။ တခါတလေ လည်း ရုပ်ရှင်ထဲမှာလား ... အိပ်မက်ထဲမှာလား … တကယ့်ဘ၀ လား …. ခွဲခြားဖို့ ခက်နေတဲ့ စိတ်နယ်လွန် သိပ္ဗံ ဆန်းကျယ် ဇာတ်လမ်းတခု ထဲမှာ ကိုယ်တိုင် ဇာတ်ကောင် တွေ ဖြစ်လို့ ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို တအားကြီး မပျော်ရွှင်တဲ့ အဖြစ်တွေနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ အိပ်မက် တွေကို အားကိုးမိ တာကို သတိရသည်။ ဒါ အိပ်မက်ကြီးပဲ . . . အိပ်မက်က နိုးရင် မိုးလင်းပြီး ကောင်းချင် ကောင်းသွားမှာ လို့ ဆန္ဒအတွေးတွေနဲ့ စိတ်သာသာရာ ရှာဘူးသည်။
အခုလည်း ညနေ ကျရင်တော့ တိတ်သွားမှာပဲ လို့ ထင်ထားတဲ့ မိုးတွေက ပိုလို့တောင် သဲလာ သည်။ ဒီ မိုး ရွာတာ လည်း အထူးပြုလုပ်ချက်ပဲ လားမသိ လို့ ပြောပြီး ရီကြတော့ ၊ ကော်ဖီခွက်ပေါ်က အငွေ့တွေ သူတို့ မျက်နှာရှေ့ ဖြတ်ပြေးသွားကြသည်။ မိုးက အေးသလောက် သူတို့ ရင်ထဲမှာ နွေးထွေးနေကြသည်။ မိုးရေတွေတစွပ်စွပ်နဲ့ တနေ့လုံး လည်ပတ်ထားတဲ့ သူ တို့ ခြေထောက်တွေ လိုပဲ ၊ သူတို့ နှလုံးသားတွေလည်း အပျော်စိတ်တွေနဲ့ နူးအိ လို့ နေတော့သည်။
ခရီးတခုကတော့ဖြင့် ၊ အဆုံးသပ်ပြီ။ အိမ်ပြန်ပြီပေါ့ ။
လူတွေ ဘာလို့ ခရီးသွားကြသည်လဲ ။ တချို့ အတွက်က ရေးကြီးခွင်ကျယ် ။ တချို့အတွက်က နိစ္စတဓူဝ ။ တချို့က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ။ တချို့က ငြီးငြီးငွေ့ ငွေ့ ။ ဘာကိစ္စ တွေ နဲ့ ခရီးသွားနေကြသည်လဲတော့မသိ ။ လေဆိပ်တိုင်းမှာ လူတွေ အပြည့် ။ လေယဉ်အတက်အဆင်း စာရင်းမှာ တစင်း ဆင်းလိုက် . . . တစင်း တက်လိုက် ။ လူတွေက အရောင်စုံ လူမျိုးစုံ ဘာသာစကားမျိုးစုံ ။ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဟိုဖက်ကနေ ဒီဖက်ကို လာလိုက် . . . ဒီဖက်ကနေ ဟိုဖက်ကို သွားလိုက် ။ ဟိုးရှေးခေတ်တုန်းက ဥရောပ ခရီးသွားကုန်သည်ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ မာကိုပိုလို တို့ ၊ ဗက်စကိုဒဂါးမား တို့ ရွက်သဘောင်္ကြီးတွေ နဲ့ နှစ်ပေါက်အောင် ခရီးသွားခဲ့ကြရပေမဲ့ ၊ အခုတော့ ညထွက် မိုးလင်းရောက် ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းကတော့ ၊ ခရီးစဉ်တွေ အားလုံးကို ချောချောမွေ့ မွေ့ လုံလုံခြုံခြုံသာ ဖြစ်ချင်ကြပေမည် ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ အပြန်ခရီးမှာ အလယ် လေးခုံတွဲ ကြီးရဲ့ နှစ်ခုံ က လွတ်နေသည်မို့ သူတို့ နှစ်ယောက် လက်တန်းတွေ တင်ပြီး ချောင်ချောင်ချိချိ အိပ်စီးယုံ ။ လေယဉ်ဝန်ထမ်းက ညစာ စားတဲ့ ခွက်တွေ လာသိမ်းပြီးသွား တော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်မည်လို့ လျှောက်ရှာသည်။ လောလောလတ်လတ် အော်စကာ ရထားတဲ့ 12 yearsaSlave ကို ကြည့်ရင်ကောင်းမလား ။ လာတုန်းကလည်း လူမဲကား ။ ခုလည်း လူမဲကား ဖြစ်နေပြီ ။ ဒီလို ကားမျိုးကို နောက်မှ ရုံကြီးမှာ သွားကြည့်ဖို့ ဆေ့ဖ် ထားလိုက်မည်။ Gravity ကို နှိပ်ကြည့်သည်။ မင်းသား မင်းသမီးတွေက ၀ါရင့်တွေမို့ ကြည့်လို့ ကောင်းပါရဲ့ ။ ဒါပေမဲ့ ယူနီဗာဆယ်စတူဒီယို က Special Effects Show မှာ အာကသ ၀တ်စုံ နဲ့ သရုပ်ဆောင်တာကို ဟာသ လုပ်ပြတာ ကြည့်ခဲ့ရတော့ ၊ စန်ထရာဘူးလော့ကို ကြည့်ရတာ နောက်နေတယ်လို့ပဲ ထင်နေမိသည်။ နောက်ထပ် ဟောလိဝုဒ်ကားတခု ပြောင်းကြည့်တော့လဲ ၊ ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယိုထဲက ရိုက်ကွင်းကြီးတွေသာ မြင်နေတော့ . . .ခက်ပြီ ။ သူနဲ့ကျမှ ၊ ယူနီဗာဆယ် နာမယ်ပျက်ရတော့မည်။ သူက အခုခေတ် ဗွီစီဒီ ဇတ်လမ်းတွေရဲ့ နောက်မှာ ပါလေ့ ရှိတဲ့ ၊ behind the scenes ဆိုတာမျိုးတွေကို မကြိုက်သူ ။ ကြည့်ခဲ့သမျှ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အရှိန်ကို ပြန်ဖျက်လိုက်သလိုပဲ လို့ ထင်သည်။ အပြင်လောကကြီးမှာ လည်း၊ ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်ကို မကြည့်မိအောင် နေရမည့် အနေအထားတွေ ၊ ပေါများလှသည်လေ ။
Wolf of Wall Street တဲ့ ။ ဟုတ်ပြီ ။ မရောက်ခဲ့တဲ့ ဝေါလမ်းမကြီး ကို အခု သွားကြည့်ရမည်။ ဒီကားနဲ့ အော်စကာ ဇကာတင်ပါခဲ့တဲ့ လီယိုနာဒို လည်း Catch me if you can ကတည်းက သူ့ ဇာတ်ရုပ်က အတည်ပေါက်နဲ့ လိမ်စားတဲ့ ရုပ် ထွက်သွားခဲ့တာ ။ ဟောလိဝုဒ် ကား ကတော့ ဟောလိဝုဒ် ဆန်တယ်ပဲ ပြောရမလားမသိ ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို လည်း တကယ့်အဖြစ် ဆိုပြီး နာမယ်တွေ ကြီးအောင် ကြော်ထား လှော်ထား ညှော်ထားလိုက်တာ ။ ခုကြည့်တော့ဖြင့် သူ့စိတ်ထဲ ဘာမှ တွန်းတွန်း တိုက်တိုက် ဖြစ်မလာ။ Wall street ပေါ်က လက်ညှိုးတချောင်း ၊ ဖုန်းတလုံး နဲ့ ၊ ထိုင်ရာကမထ ၊ လက်တလုံးခြား ကုလားဖန် ထိုးစားနေတဲ့ လူတန်းစား တွေ ကို ပိုပြီး စိတ်ကုန်လာတာပဲ ရှိတယ်။ ငွေရှင်စနစ် ရဲ့ မတည်ကြည်မူ လက်ဝါးကြီးအုပ်မူ ကို ပိုပြီး စိုးရွံ့လာတာပဲ ရှိတယ်။ ဒါတွေကပဲ ၊ သူ့ကို တွန်းတိုက်သွားတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့လေ။ နေပါအုံး ။ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ တကယ့်အပြင်က ဇာတ်လိုက် ၀ံပုလွေကောင်က.. သူ လိမ်စား လူလည်ကျခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို ဇာတ်ညွှန်းလုပ်ပြီး ရောင်းစားတော့ လည်း ၊ ကြည့်လိုက်ကြတာ ၀က်ဝက်ကွဲ ။ သန်း နဲ့ ချီပြီး လုပ်စားသွားပြန်တာပဲ မဟုတ်လား ။
ဟောလိဝုဒ်တွေ တော်ပီ... ပြင်သစ်ကား တကားလောက် ကြည့်မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီးကာမှ ၊ Kindle လေးကိုသာ ဖွင့်လိုက်မိသည်။ နိုဘယ်ဆုရှင် ကြီး စတစ်ကလစ်ဇ် က ဖြင့် အခန်းတစ်က.. မကျော်သေး ။ အမေရိက ရဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုံး သူဌေးကြီးတွေကဖြင့် တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်သေး ။ ၉ ၉ ရာခိုင်နှုံး ပြည်သူတွေ ရဲ့ အရေးကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့ အခန်းတွေ မရောက်သေး ။
ဒီ စာအုပ်က တော်တော် တော့ ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်။ Price of Inequality ကို ဘယ်သူတွေက ပေးနေရသည်လဲ . . . American Dream ဆိုတာ ရော တကယ်ရှိသလား လို့ အညွန်းမှာ ကတည်းက ရေးထားသည်။ အမေရိက မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့ မိတ်ဆွေတွေကိုတောင် ၊ ဒီမေးခွန်းတွေ သေသေချာချာ မမေးခဲ့ရ ။ မေးစရာလည်း လိုမည်မထင် ။ လောကအရာတွေက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တွေးတော့ ရေးတော့လည်း စာတစောင် ပေတဖွဲ့ ပေါ့ ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးကြည့်တော့လည်း ၊ အမေရိကန် ဒရင်းမ် ဆိုတာ အမေရိကန် ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်တွေ ထဲမှာ မြင်နေရသည်ပဲ ။ အိပ်မက် ဆိုတာကတော့ အမေရိက မှာမှ မဟုတ်။ ဘ၀ မှာ အိပ်မက် မပါတဲ့ ပြကွက်မရှိ ။ အိပ်မက် နဲ့ အားယူ ။ အိပ်မက်နဲ့ ဖြေလျော့ ။ အိပ်မက်နဲ့ လှည့်ဖျား ။ အိပ်မက်တွေ နဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ ပြောင်းကြည့်လို့ မှ မရရင် ၊ ဘ၀ ကြီးက ဘယ်လောက် ညီးငြွေ့ ဖို့ ကောင်းလေမလဲ ။ ဘယ်လောက် မွန်းကျပ်ဖို့ ကောင်းလေမလဲ ။
အခုနတည်းက နည်းနည်း ခုန် ချင်နေတဲ့ လေယဉ်ကြီးက ပိုပြီး တုန်ခါနေသလို ။ (တင်) ကနဲ ၊ ခါးပတ် မီးလေး နီသွားတော့ ကျောထဲ စိမ့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။ အမျိုးသား ကတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေပြီ ။ အောက်ကို နှိမ့်ဆင်းနေတဲ့ ခံစားမူကို တချက် တချက် ရ သည်။ Kindle လေးကို ပိုက်ပြီး မျက်စိကို အသာ မှိတ်လိုက်သည်။ ခဏ တော့ လေယဉ်ကြီး ငြိမ်သွားပြန်သည်။ ( တင်) ကနဲ..ခါးပိတ်မီးလေး စိမ်းသွားပြီ ။ ဟူး တော်ပါသေးရဲ့ ။ ဒါလည်း ဇာတ်ဝင်ခန်း တခုရဲ့ အထူးပြုလုပ်ချက် ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာ လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဟာသ လုပ်ပြီး စိတ်ကို ဖော့ကြည့်သည်။ လေယဉ်တစင်းလုံးလိုလို စိတ်အေး လက်အေး အိပ်မောကျနေကြဆဲ ။ သူ့ခေါင်းပေါ်က မီးလေးကို ပိတ်လိုက်ရင်း ၊ သူလည်း ကြိုးစားပြီး အိပ်တော့မည်။ ကိုယ်ဘာမှ မတတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတခုမှာ ၊ စိုးရိမ်ပူပန် နေလို့လည်း အပိုပင် ။ ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပဲ ၊ အိပ်မက်ကို အားကိုးရမည်။ အိပ်မက် ထဲမှာ သူ ပျော်စရာတွေ တွေ့ချင် တွေ့နိုင်မည်။ သေချာတာတော့ အိပ်မက်က နိုးရင် ၊ မနက်ခင်းကို တွေ့ ရမည်။ ကာလယန္တယားကြီးထဲမှာ ၊ အိပ်မက်တွေကို စီးပြီး အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းတွေပေါ်က ဖြတ်ကျော် သွားနိုင်တယ် ဆိုတာ၊ လူတိုင်း သိပါ့မလား ။
၂၄ - ၂၇ /၀၃/၂၀၁၄
Labels: Movies , personal , Travel
facebook ပေါ်မှာ ကေခရီးသွားတဲ့ပုံလေးတွေ မြင်ရတာနဲ့ ကေပြန်လာရင် ပို့ စ်လေးဖတ်ရမယ်လို့ မျှော်နေတာ.. ဆန္ဒပြည့်ဝသွားတယ်... ပျော်စရာကြီးနော်ကေ... မရောက်ဖူးတဲ့နေရာသွားရတာရယ် ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ ရတာရယ်... ကေ့ပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး ကေနဲ့ အတူ လိုက်သွားတယ်လို့ ခံစားရတယ်... ဒါပေမယ့် ride တွေ အစီးမှာတော့ ချန်နေခဲ့တယ်.. ကြောက်လို့ ... ဟိဟိ... btw ကေကချောလိုက်တာနော်... ခုထိကျောင်းတုန်းကပုံလေးတွေထဲကလို နုတုန်း... အမလဲ ချိုသင်းတို့မမြမိုးတို့ လို အပြင်မှာ မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ... ကျွန်းပိစိကို လာလည်ဦးနော်..
တို့တွေ တနေ့တနေ့ ခရီးတွေ ထွက်ကြတယ်။ ခရီးတိုလေးအတွင်းမှာ စိတ်တူသူတွေ တွေ့ကြ၊ ခင်ကြ၊ ပျော်ရွှင်ကြရတာ ကုသိုလ်တပါးပဲ။
ဒီလိုပဲ ဒီလူ့လောကထဲကိုလဲ ခရီးထွက်လာသလိုပဲ အလည်ရောက်ကြတယ်။ လူ့လောကထဲ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ကေတို့လို ညီအမရင်းတွေလို ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ တွေ့ရတာလဲ ကုသိုလ်တပါးပဲပေါ့။